DHEGEYSO-Ciidanka Puntland iyo Soomaaliland oo isku horfadhiya jiida hore. – Radio Daljir
DHEGEYSO-Ciidanka Puntland iyo Soomaaliland oo isku horfadhiya jiida hore.
Luulyo 19, 2016 4:01 b 0
Dhahar, July 19 2016-Ciidamda Puntland iyo Somaliland ayaa isku horfadhiya deegaano katirsan gobolada Sanaag iyo Haylaan oo shalay dagaal uu ku dhexamaray , waxaana jira gurmadyo ciidan oo labada dhinac ay kala helaayaan.
Lataliyaha Madaxwaynaaha Puntland ee xagga amaanka gobolada Haylaan iyo Sanaag Axmed Xuseen Doonyaale oo sidoo kale horay usoo noqday wasiirka xanaanada xoolaha Puntland ayaa uga waramay radio daljir Maxamuud Cabdi Ibraahim ayaana waraystay oo marka hore waydiyay xaaladda sida ay hadda tahay.
DHEGEYSO-Barnaamijkii xulashada Daljir iyo Khadar Cawl Ismaaciil.